विवाहमा ‘बेस्ट म्यान’ बन्नेछन् कट्रिनाका एक्ला दाइ, के गर्छन् ? | Ratopati
विवाहमा ‘बेस्ट म्यान’ बन्नेछन् कट्रिनाका एक्ला दाइ, के गर्छन् ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २१, २०७८ chat_bubble_outline0
कट्रिना कैफको परिवार नायिकाको विवाहका लागि जयपुर पुगिसकेको छ । कट्रिनाकी आमा, उनका दिदी बहिनी र दाइ, सबैलाई सोमबार विमानस्थलमा देखिएको थियो । कट्रिना र विक्कीको विवाहको विषयमा हालसम्म थुप्रै अपडेट आइसकेको छ । रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने कट्रिना र विक्कीले दुई प्रकारको विवाह गर्नेछन्, सुरुमा हिन्दु र दोस्रो क्रिश्चियन । हिन्दु विवाहमा त आमा–बुवाले छोरीको कन्यादान गर्छन् तर क्रिश्चिन विवाहमा ‘बेस्ट म्यान’ ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन् ।
को हुन् कट्रिनाका दाइ सेबास्टिन ?
कट्रिनाको विवाहमा उनका दाइ सेबास्टिन लौरने मिसेल बेस्ट म्यान बन्न लागेका छन् । उनी बहिनीको विवाहमा क्रिश्चियन परम्परा अनुसार टोस्ट रेज गर्नेछन् र विशेष भाषण दिनेछन् । स्मरण रहोस्, सेबास्टिन, कट्रिना र उनका बहिनीहरुका एक्ला दाइ हुन् । दाजु बहिनीहरुको सम्बन्ध निकै गहिरो छ । सेबास्टिन पहिला पनि मुम्बईमा आफ्नी बहिनी कट्रिनासँग देखिइसकेका छन् । उनी फर्निचर डिजाइनिङमा माहिर छन् । उनको क्रिएटिभिटीमा उनको आफ्नै एउटा ब्लग पनि छ । सेबास्टिनलाई घुम्न असाध्यै मनपर्छ । उनी एड्भेन्चरका सौखिन हुन् र व्यावसायिका स्कियर पनि हुन् ।
यस्तो छ तालिकाः
कट्रिना विक्कीको विवाह अघि प्रि–वेडिङका कार्यक्रमहरु भव्य हुनेछन् । ७ डिसेम्बरमा संगीत र ८ डिसेम्बरमा कट्रिनाको मेहेन्दीको आयोजना गरिनेछ । ९ डिसेम्बरमा विवाह र त्यसपछि १० डिसेम्बरमा उनीहरुले आफ्नो रिसेप्सन दिनेछन् । हालसम्मको रिपोर्ट अनुसार उनको विवाहमा करण जोहर, आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, वरुण धवन, नताशा दलाल, शशांक खैतानसमेत बलिउडका ठूला कलाकारको उपस्थिति रहनेछ ।
विवाहको तयारीका लागि वेडिङ प्लानर्सले पूरा बन्दोबस्त मिलाइसकेको छ । पाहुनाको नाम फेरेर उनीहरुलाई गोप्य कोड दिइएको छ । यो गोप्य कोडको जानकारी वेडिङ प्लानर्स र पाहुनाबाहेक अरु कसैलाई पनि थाहा हुने छैन । विवाहको मण्डप पनि निकै विशेष हुनेछ । खबरका अनुसार कट्रिना र विक्कीको मण्डप पनि सिसाले तयार गरिएको छ । यस्तै गोपनियताका लागि विवाहमा मोबाइल प्रतिबन्ध गरिएइको छ । यहाँसम्म कि कुनै ड्रोन उडेको देखे त्यसलाई सुट गर्ने आदेश दिइएको छ ।
जब आयुष्मानले ताहिराको ‘ब्रेस्ट मिल्क’ पिएका थिए, बताएका थिए पौष्टिक
आमिर खान, करण सिंह ग्रोवरदेखि श्वेता तिवारीसम्मः दोस्रो विवाह पनि सफल नभएका यी सेलिब्रिटी
एश्वर्या राजनीकान्तकी साथी श्रुती हसनसँग धनुषको अफेयरको थियो चर्चा, त्यतिबेलै चलेको थियो विवाह टुट्न लागेको हल्ला
युट्युबर साम्राज्ञी !
‘सम्बन्धविच्छेदको उत्सव मनाउनुपर्छ’ धनुषको विवाह टुटेपछि राम गोपाल वर्माको विवादित ट्वीट
प्रियंकाकी छोरी १२ हप्ता अघि नै जन्मिइन्, कमजोरीका कारण केही दिन अस्पतालमा रहने